PSG oo si rasmi ah u go’aamisay mustaqbalka laacibkeeda khadka dhexe Adrien Rabiot – Gool FM
(PSG) 18 Dis 2018. Kooxda Faransiiska ah ee Paris Saint-Germain ayaa ku dhawaaqday in xidigeeda khadka dhexe Adrien Rabiot inuusan saxiixi doonin heshiis cusub uu kusii joogi doono garoonka Parc des Princes.
Adrien Rabiot ayaa si rasmi ah kaga dhaqaaqi doono kooxda Paris Saint-Germain xili ciyaareedka soo aadan, taasoo albaabada u furi doonta Barcelona si ay ugu hesho saxiixiisa beeca xurta ah.
23 jirkan reer France ayaa lala xiriirinayay xiliyadii lasoo dhaafay inuu u dhaqaaqi doono kooxda Barcelona, xili kooxda reer Spain ay si xoogan u xiiseeneyso saxiixiisa.
Qandaraaska Adrien Rabiot uu ku joogo kooxda PSG ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga soo socda, waxayna kooxda reer France isku dayday in ay qandaraaska u kordhiso, balse laacibka ayaa iska diiday inuu sidaas sameeyo.
Si kastaba agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ayaa wuxuu xaqiijiyay ugu dambeyntii in Adrien Rabiot uusan qeyb kasii ahaan doonin qorshaha PSG xili ciyaareedka soo socda.
“Ciyaaryahankeena ayaa noo sheegay ka dib kulankii ugu dambeeyey ee aan wada qaadanay inuusan saxiixi doonin heshiis cusub, isla markaana uu kooxda ka tagi doono dhamaadka xili ciyaareedkan”.
“Xaalada ciyaaryahanka ee kooxda, waxaa jira cawaaqibyo badan, wuxuuna baaqi kusii ahaan doonaa kursiga keydka”.